Usoro nzacha ajụjụ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Kedu ihe kpatara mmiri nzacha mmiri mmiri ji dị mkpa?
Nzacha mmiri dị mkpa maka sistemụ ịgba mmiri niile. ... Ọ bụrụgodi na ụmụ irighiri ájá nwere ike gabiga na sistemụ gị na -ejigide ya, ha na -ebute uwe. Valvụ akpaaka nwere obere ụzọ mmiri n'ime ha nke nwere ike bụrụ nkwụnye nke na -eme ka valvụ ahụ mepee ma ọ bụ mechie
Kedu nke kacha mma nzacha diski ma ọ bụ nzacha ihuenyo?
Mgbe ụfọdụ, a na -enye ogo nzacha dị ka nha ntupu nha nke tụnyere nzacha ihuenyo. Otu uru na nzacha diski nwere n'elu mgbasa ozi nyo bụ na ọ nwere ike ịlaghachi azụ ngwa ngwa na obere mmiri iwepụ. Ihe nzacha diski Ejiri ọkọlọtọ ISO 9912-2 kpuchie ihe eji arụ ọrụ ugbo.
Kedu otu esi ehicha ihe nzacha?
Wepu nyo site na njikọ. Hichaa nzacha mmiri mmiri site na ihichapu ihe nkwụnye ego ọ bụla na nyo. Tinye ihe nzacha n'ime obere akpa nwere mmiri dị ọcha ka ọ tọpụ ma wepụ ihe ọ bụla na -adịghị ọcha
Kedu nzacha nke m ga -ahọrọ maka usoro ịgba mmiri?
Dịka iwu n'ozuzu, m ga-akwado oghere 60-70 maka isi ịgba na nzacha 100-mesh mgbe valvụ maka ịgba mmiri mmiri. Ego mgbakwunye na sistemụ nzacha dị mma ga -akwụ ụgwọ onwe ya n'okporo ụzọ site na mbelata mmezi yana obere mmechi akụkụ.